Sebenzisa ikhaya umatshini wokugaya irayisi ngomthamo omncinci othunyelwe e-Afrika
1.Uyilo lomatshini wokugaya irayisi ngumlimi kwaye lusetyenziswa ekhaya,Ukusebenza ngokulula nangolwazi lokuyalelwa. Umatshini wokuchaphazela irayisi yonke indawo ulungele ukusetyenziswa kwekhaya kumafama.
2.Ukusetyenziswa kwekhaya kwerayisi yokugaya irayisi kunokugaya i-paddy ngqo kwirayisi ebunjiweyo kwaye yahlule irayisi ephukileyo, i-rough bran kunye ne-bran ecocekileyo ngexesha elifanayo.
Iinkcukacha zeMveliso yokusetyenziswa kwekhaya irayisi
Ukusetyenziswa kwekhaya kwerayisi yokugaya irayisi okanye umatshini wokuchwela irayisi usebenzisa umatshini wezolimo osetyenziselwa ukuqhubekisa ukusebenza komatshini (iilekese zangaphandle) zeerayisi. Kuyo yonke imbali, Kukho iindlela ezininzi zokucoca irayisi. Ngokwesiko, Ukusetyenziswa kwekhaya kwerayisi yokugaya irayisi iya kubhalwa kusetyenziswa uhlobo oluthile lodaka nepestle. Ikhaya elilula lokusebenzisa umatshini wokugaya irayisi ukwenza oku kukuphamba kwerayisi. Kamva oomatshini abasebenza ngakumbi baphuculwa ukuze busebenze kunye nepreyishe. Aba matshini wokugaya irayisi baphuhliswe basebenzise umhlaba wonke.
Umatshini wokugaya irayisi wekhaya uyayazi injongo yokutsala ngokucinezela kunye nokujijisa amandla phakathi kwesibini esiqengqelekayo kunye noxinzelelo lobunzima. I-rolling iron inokuthi isetyenziselwe ukufukula umququ wepaddy.uye usetyenziswe ngaphakathi isityalo selayisi esincinci sembewu Ukusetyenziswa komzi mveliso omncinci.Umxube wezinto ezenziwe ngumsi wehlulwe waba yirayisi e-brown kunye ne-husk yomkhosi womoya kwigumbi lokwahlula ukusetyenziswa komatshini wokugaya irayisi.
Iimpawu zomatshini wokusetyenziswa kwrayisi yokugaya irayisi
1.Ukusetyenziswa kwekhaya irayisi yokugaya irayisi ngokuyintloko isetyenziselwa i-paddy irayisi hulling,inokuntywila paddy kwilayisi emhlophe.
2.Umsebenzi okhuselekileyo.ukusebenzisa umatshini wokugaya irayisi unokusebenza rhoqo kwimeko yokulayisha,akukho sidingo sokukhathazeka ngokulayisha ngaphezulu okanye ixesha elide lokusebenza.
3.Lo matshini wokugaya irayisi wekhaya ungadibana ne-dizili okanye i-injini ye-petroli endaweni yemoto yombane ukuba amandla ombane awafumaneki. ,Abanye babathengi basicela ukuba sitshatise idizili okanye ipetroli .
4..Kulula ukusebenza.Qalisa umatshini wokugaya irayisi,lawula uxinzelelo loxinzelelo.Irice iya kuphuma ngaphandle komququ.
5.Umbala wokusetyenziswa kwerayisi wokugaya irayisi unokupeyintwa ngokweemfuno zakho.nokunikezela ngenkonzo ye-OEM.
Iiparamitha zobugcisa bokusebenzisa umatshini wokugaya irayisi
ividiyo yomatshini wokugaya irayisi ekhaya
Nxibelelana nathi Ngekhaya Sebenzisa irayisi